SOAVINA-BETAFO : Zazalahy vao 11 taona monja maty nilatsahan’ny varatra
Tovolahy tokony ho eo amin’ny 11 taona eo i Fitiavana Nomenjanahary antsoina hoe : Dafy, kilasy famaranana ao amin’ny Sekoly Loterana Ambatolahy no maty tsy tra-drano nilatsaham- potaka tao Manely kaominina ambanivohitr’i Soavina, Distrikan’i Betafo. 6 février 2019
Ny tolakandron’ ny alatsinainy tokony ho tamin’ny 4ora hariva lasa teo no niseho izany loza mahatsiravina izany. Ny nampitolagaga ny vahoaka dia tsy nisy orana na tselatra tamin’io fotoana io fa tonga dia varatra nipoaka avy hatrany no niseho. Niditra avy tao atsimon- trano ny varatra, namakivaky ny efitra ary nivoaka teo amin’ny zoron- trano avaratra.
Araka ny fanambaran’ireo izay nanatri-maso dia toy ny tselatr’afokasoka ny fisehony ary toy ireny lanin’ny herinaratra ireny ny tanan’ity tovolahy maty ity na dia teny amin’ny faritra somary lavitry ny trano aza no nisy azy. Hitan’ity zaza ity ho feno setroka teo ambany lavarangana ka lasa izy niditra tao an- trano. Safotra avy hatrany izy sy ny reniny fa ity farany kosa vetivety dia nahatsiaro tena. Ilay tovolahy kosa may tanteraka ny tapany ambony amin’ny vatany, hoy hatrany ny fanazavana.
Niezaka nitondra azy teny amin’ny toeram- pitsabona ireto fianakaviana saingy tsy niverina intsony ny ainy. Araka ny loaharanom- baovao voaray dia zavatra tsy mpiseho firy amin’io tanànan’i Manely io izany filatsaham- baratra izany ary tsy mbola nahazatra ny manodidina ny nandre sy nahita izany varatra nilatsaka izany. Araka ny nambaran’ny solontenan’ny mponina hatrany dia tao Antokofoana, izay tanàna tsy lavitra an’i Manely Soavina no nisehoana filatasaham- baratra tamin’ny taon-dasa, izay namoizana ain’olona 4 mianaka. Araka ny vaovao voaray hatrany dia efa notanterahina omaly alarobia ny fandevenana an’i Fitiavana Nomenjanahary na i Dafy izay natao tao Soavina Betafo ihany.
Angella Maharitra (Stagiaire)